Rehefa miasa ny jammer signal finday dia mampiseho famantarana ny telefaona finday sasany. Fa maninona no izao?
Rehefa miasa ny fitaovana miaro amin'ny telefaona finday dia misy roa ny mety ho fambara apetraka amin'ny telefaona finday:
Ny voalohany dia afaka mifandray ny telefaona finday. Raha azo ampifandraisina ny telefaona finday dia midika izany fa tsy nahatratra fiarovana mahomby ilay faritra arovana ary misy fivoahana. Avy eo dia midika koa fa ny vokatra miaro finday misy anao dia tsy afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny tranokalanao;
Ny iray dia ny finday tsy afaka mifandray. Raha izany no izy, midika izany fa ao anaty krizy ny telefaona finday ary mitranga amin'ny telefaona finday misy fanoherana mahery vaika sy fahatsapana avo izany.
Mbola afaka mijery Internet ve aho rehefa voasakana ny telefaona finday any am-pianarana?
Amin'izao fotoana izao, sekoly maro no nametraka fitaovana hiaro finday. Aorian'ny famadihana ny ampinga, mbola afaka miditra amin'ny Internet ve ny fetin'ny mpianatra?
Amin'ny ankapobeny, misy fomba telo hivoahana Internet amin'ny telefaona finday.
Ny fomba voalohany dia ny fivezivezena amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny signal an'ireo mpandraharaha finday. Raha vantany vao mirehitra ny fitaovana miaro dia tsy afaka mahazo ny signal an'ny mpandraharaha ny telefaona finday, izay mitarika amin'ny tsy fahafahany miantso na mandefa hafatra an-tsoratra, ary tsy afaka miditra amin'ny Internet akory. Ny ampinga dia mandaitra.
Ny fomba faharoa dia ny mampifandray ny telefaona finday amin'ny WIFI mba hivezivezy amin'ny Internet. Raha tsara vintana ianao dia tsy mitondra ny asan'ny fiarovana ny fantsona 2.4gwifi ilay jammer, arahaba arahaba, na dia tsy afaka miantso sy mandefa hafatra an-tsoratra aza ianao, saingy manana tambajotra eto amin'izao tontolo izao aho, QQ sy WeChat feo sy horonantsary mbola afaka tanterahina, tsy olana ny mijery sarimihetsika sy milalao lalao. Na izany aza, raha toa ka manohana ny fiasan'ny wifi ny fitaovana miaro dia tsy azo idirana ny Internet amin'ity tranga ity, ary mandaitra ny ampinga.
Ny fomba fahatelo dia ny famindrana ny port LAN an'ny tambajotra tariby mivantana amin'ny telefaona finday. Ity fomba ity dia toy ny fidirana amin'ny tontolon'ny tsy misy olona, ​​toy ny solosaina mifandray mivantana amin'ny tariby tambajotra, na manokatra na tsia ny ampinga, tsy misy ny fanelingelenana, ary milamina ny hafaingan'ny tambajotra. Fa raha tsy misy ny LAN interface amin'ny tambajotra ivelany dia hantsoina tsy isanandro izy io ary tsy handeha.
Na izany na tsy izany, ny lahasa lehibe amin'ny maha mpianatra dia ny mianatra, miasa mafy ary mianatra mafy, ny hoavinao dia ny hoavin'ny tanindrazana.
Fa maninona no tsy misy mpanafika eo amin'ny fiaramanidina?
Na dia antsoina hoe "jammer" aza ny signal jammer, dia "jammer" sy jammer mahery vaika tokoa izy io.
Ny antony tsy ahafahan'ny telefaona finday ampiasaina amin'ny fiaramanidina dia ny hisorohana ny fanelingelenana finday tsy hanelingelina ny seranam-piaramanidina. Ny fametrahana "jammer" dia midika hoe fametrahana loharano misy fitsabahana. Noho izany, tsy hisy fitaovana toy izany amin'ny fiaramanidina!